weather – CharTake
chartake | December 6, 2020
ချင်းပြည်နယ်တွင် ရေခဲမှတ်အောက် အနုတ်ဒီဂရီအထိ အပူချိန်ကျဆင်းမည်ဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ နေရာအချို့တွင် မြူနှင်းများ ထူးထပ်စွာ ကျရောက်နိုင် (မိုးဇလ ပညာရှင်မလေး စုစုစံ) ရေခဲတွေ ပွင့်တောမယ် … ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ မနက်မှာ ချင်းပြည်နယ်ကြီး အအေးပိုစေကာ ဟားခါး မင်းတပ် မတူပီကန်ပက်လက် ဒေသတွေရဲ့ ချင်းတောင်တန်းတွေမှာ အပူချိန်
chartake | November 21, 2020
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသမှ တောင်သူဦးကြီးများအတွက် ၂၁ . ၁၁ . ၂၀၂၀ မှ ၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ခန့်မှန်းချက် ၂၁ . ၁၁ . ၂၀၂၀ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ၅၉ မိနစ် ယခုရက်ပိုင်း အမေးများလာသော မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသ မကွေးတိုင်းဒေကြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
chartake | October 23, 2020
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော မုန်တိုင်းငယ် အခြေအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်နေသော တောင်တရုပ် ပင်လယ်မှ အားကောင်းသောမုန်တိုင်း အခြေအနေ ၂၃.၁၀.၂၀၂၀ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်း (အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အနောက် ဘင်္ဂလားပြည်နယ် ကမ်းလွန် – ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံကမ်းခြေတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော မုန်တိုင်းငယ်(Depression)
chartake | October 21, 2020
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဖြတ်သန်းရာ လမ်းကြောင်းအခြေအနေ ခန့်မှန်းချက် ၂၁.၁၀.၂၀၂၀ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၄ မိနစ် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လေဖိ အားနည်း ရပ်ဝန်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိ နေပါတယ်။ အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းရဲ့ဖြတ်သန်းရာလမ်းကြောင်းကို အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နေ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းမဖြစ်ခင်က ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဆက်လက်ခန့်မှန်းပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကနဦးတွင်
လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်တွင် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး မိုးများမည်၊ စပါးရိတ်သိမ်းမည့် တောင်သူများ အထူးသတိထားရန်လိုအပ်ဟု မိုးလေဝသ ပညာရှင်ဦးချစ်ကျော် သတိပေး အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်မှ ၂၆ ရက် တပတ်အတွင်းမိုးလေဝသအခြေအနေ (19/10/2020 11:45am mst) ဒီတပါတ်လည်း လေဖိအားနည်း သိုမဟုတ် လေပွေလှိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သေးတဲ့ ရက်သတ္တပါတ် ဖြစ်နေဆဲပါ။ အလယ်ပိုင်းဒေသ တချို့ ( စစ်ကိုင်းအောက်၊
chartake | October 10, 2020
အသစ်ဖြစ်လာသော တောင်တရုပ်ပြင်လယ်က မုန်တိုင်းငယ် (သို့) မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းကို ရွေမိုးငွေမိုးပေးနိုင်သော “TD 17 W ” JTWC ရဲ့ ယနေ့နံက် ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ် ထုပ်ပြန်ချက်အရ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဘက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် တောင်တရုပ်ပြင်လယ်တွင် မုန်တိုင်းငယ် တစ်လုံး ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အဆိုပါ
chartake | September 20, 2020
ယနေ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေဝသ သတင်းများ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အ‌ခြေအနေ ။ ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းရာမှ အားအလွန် ကောင်းနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိ ခန့်မှန်းချက် ။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် ( မြောက်ပိုင်း
chartake | August 17, 2020
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရခိုင် ကရင်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ပြီး မိုးကြီးနိုင် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ၊ ရခိုင်၊ ကရင်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ နေရာကွက်ပြီး မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာနရဲ့ ဩဂုတ်လ (၁၇) ရက် မနက် (၇) နာရီ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်အရ
chartake | July 21, 2020
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အ‌ခြေအနေ ။ ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားနည်းနေပါသည်။ ယနေ့ ညနေအထိ ခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) ၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား၊
chartake | July 4, 2020
ဇူလိုင်လလယ်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းနှစ်ကြိမ်နှင့် မုန်တိုင်းငယ်တစ်ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထား ဇူလိုင် လလယ်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း နှစ်ကြိမ်နှင့် မုန်တိုင်းငယ် တစ်ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်ဟု မိုးလေ ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန မှသိရသည်။ မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဇူလိုင် ၄ ရက် People Media မှ
ပြည်သူချစ် ဝါရင့်လူရွှင်တော်ကြီး ဦးစိန်ရိုး ကွယ်လွန်